Haween dood ku yeeshay Muqdisho - Xusuus
Saturday, 14 April, 2012 I Latest Update 12:23 pm Home
Haween dood ku yeeshay Muqdisho
By: xusuus, Post on:14 April, 2012, Share this story
In ka badan 150-Haween ah oo ka kala socday qeybaha bulshada ayaa saakay aqoon isweydaarsi uga furmay Hotelka Saxafi ee magaalada Muqdisho, iyadoo munaasabadda furitaanka dood cilmiyeedkaasina ay ka soo qeyb galeen madax ka kala socotay ururrada haweenka, Qurba joogta iyo marti sharaf lagu casuumay.
Dood cilmiyeedkaan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa halku-dhigiisu ahaa “Aynu u istaagno sidii loo joojin lahaa dhiigga qubanaaya loona dhisi lahaa qoysas nabadeed”, waxaana soo qabanqaabisay isla markaana isku duba ridday Hay’adda Mideynta Dhallinyarada Soomaaliyeed ee UYS.
Ugu horeyn waxaa khudbadda furitaanka dood cilmiyeedka halkaasi ka jeedisay Guddoomiyaha Degmada Warta Nabadda (Ex-Wardhiigley) ahna Guddoomiyaha guddiga haweenka UYS Deeqo C/qaadir Axmed oo ka jawaabeysay mid ka mid ah Lix Su’aal oo ka qeybgalayaasha iyo guddiga Hay’adda Mideynta Dhallinyarada UYS jawaabo ka bixinayeen ayaa sheegtay in falalka qaraxyada ku soo kordhaya Muqdisho ay galaafteen nolosha dad qiimo ku leh bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda.
“Aniga waxaan isleeyahay falalka qaraxyada ah in looga hortegi karo oo kaliya wacyi gelinta Culumaa’udiinka inay badiyaan iyo in shacabka Muqdisho ay isku xir sameeyaan” ayay tiri Deeqo C/qaadir Axmed.
Waxay sheegtay Deeqo C/qaadir inay nasiib darro tahay haweenka inay ka qeyb qaataan qaraxyada, iyadoona caddeysay in wararka suuqa la isla dhex marayo ay sheegayaan inay jiraan haween badan oo loo diyaarinayo inay is qarxiyaan, waxayna uga digtay haweenka in arrintaasi ka feejignaadaan.
Xaawo Maxamuud Cali (Xaawo Kiin) oo ka mid a guddiga haweenka ururka mideynta dhallinyarada Soomaaliyeed ee UYS ayaa ka hadashay haweenka is qarxinaya, waxayna sheegtay in labadii haween ee is qarxiyay ay ka war heleen in lagu khasbay falkaasi inay sameeyaan, taasi oo caado u ah kooxaha Shabaab iyo Al-Qaacida inay u hanjabaan dadka haddii kale ay sameeyaan waxa ay ka doonayaan.
“Haddii aan laga hortegin falalka lagu baabi’inayo dadka hormuudka u ah shacabka Soomaaliyeed waxaa la arki doonaa haween iyo waayeel is qarxinaya” ayay tiri Xaawo Kiin oo ku boorisay bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan haweenka inay sameeyaan iskaashi looga hortegayo falalka qaraxyada.
Dhinaca kale dood cilmiyeedka haweenka ee saakay Muqdisho ka dhacay, ayaa waxaaa la isku dhaafsaday doodo kulul oo ku saabsan qaabka loo joojin karo falalkaasi, waxayna guddiga haweenka UYS qaarkood soo jeediyeen in haweenka Soomaaliyeed kaalinta ugu weyn ay ka qaataan sidii nimankooda iyo caruurtooda ay uga wacyi gelin lahaayeen falalka qaraxyada is miidaaminta ah ee loo adeegsanayo.
Al Shabaab oo gowracay Abuu Mansuur Al Amriika Maamulka gobolka Sh/dhexe oo si rasmi ah loogu dhawaaqay Categories
xusuus Add a Comment on "Haween dood ku yeeshay Muqdisho"